Isiphandla sezikhali sesiFundazwe saseNtshona kapa
Isiphandla sezikhali sesiFundazwe saseNshona kapa yamukelwa futhi yasungulwa yiPhalamende lesifundazwe ngo-1998. Lezi zikhali zakhiwe nguFred Brownell, ngemuva kokucwaninga ngokucophelela nokubonisana nabamele bonke amaqembu ezombangazwe abamele ePhalamende lesifundazwe.
Izakhi ezisetshenziselwa ukuklama zikhethiwe ukuba zimelele okuhlukile eNtshonalanga Kapa. Isisekelo esibhakabhaka simelela isimo sezinto ezibonakalayo seTable Mountain, eNtshonalanga Koloni.
Kuzo zonke izisekelo ezinamathela ezimpaphe zezinkuni yi-motto - SPES BONA - okusho ukuthi "ithemba elihle". Izimpaphe zezinkumbi zimelela i-Little Karoo.
Kusukela phansi kukhona isihlangu, esine-anchor, isiqephu samagilebhisi futhi phakathi nendawo ebhodweni lobumba. Ihange limelela ithemba, ukuzinza, ukholo kanye nezifundazwe zasemaphandleni emlandweni.
Amagilebhisi abonisa ukubaluleka kokulima kanye nokukhiqizwa kwewayini eNtshonalanga Kapa. Ibhodlela lobumba lifanekisela ukukhiqizwa futhi njengendlela yokuzibandakanya kwabakhileyo baseKapa, ​​amaKhoi.
Ukusekela isihlangu kukhona iQuagga (Equus quagga quagga) futhi, i-Bontebok (i-Damaliscus dorcas dorcas), zombili zazo zingumdabu esifundazweni. I-quagga okwamanje ayiqedi, kodwa ucwaningo luyaqhubeka nohlelo olukhethekile lokuzalanisa ngenhloso yokukhiqiza inani elisha labo.
I-bontebok yayisesinye isikhathi esiseduze nokuqothulwa kodwa manje inabantu abasebenza kahle. Phezulu kwesihlangu i-coronet, eyakhiwe i-beaded heading, njengoba igqoke iSan, i-protea, emele i-fynbos etholakala esifundazweni nasemasongweni afanekisela ukuphelela, njengoba engapheli futhi akukho isiqalo. Isigqoko esisha sezandla sigqugquzela ukuhlonipha isithunzi nesithunzi seWestern Cape.